Diary of A Taxi Driver (တက္ကဆီဒရိုင်ဘာတစ်ဦး၏ နေ့စဉ်မှတ်တမ်း- ခင်စောတင့်) – Hsu Myat Moe
Hsu Myat Moe
ဆုမွတျမိုး >> အလကေ့ပြေါကျသောမွကျရိုငျးတဈပငျ
Women’s World Journal
Diary of A Taxi Driver (တက္ကဆီဒရိုင်ဘာတစ်ဦး၏ နေ့စဉ်မှတ်တမ်း- ခင်စောတင့်)
အရင်တစ်ရက်က ဆရာမခင်စောတင့် ဘာသာပြန်တဲ့ တက္ကဆီဒရိုင်ဘာတစ်ဦး၏ နေ့စဉ်မှတ်တမ်း ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ် ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီစာအုပ်လေးဟာ singapore က ဒေါက်တာဘွဲ့ရ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ဟာ စီးပွားရေးဂယက်အတွင်းမှာ အလုပ်ပြုတ်ပြီး taxi မောင်းရတဲ့အကြောင်းလေးပါ ။ စာရေးသူ blogger Cai Mingjie ဟာ သူ့ရဲ့ taxi မောင်းရင်းကြုံရတဲ့နေ့စဉ်ဘ၀ကို blog မှာရေးရင်းကနေ နောက်ဆုံးစာအုပ်အဖြစ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခံရတဲ့အထိ သူ့ရဲ့ စာတွေက အောင်မြင်ခဲ့တာပါ ။ ဒီနေရာမှာ ကျမက သူ့ဘ၀ ၊ သူ့ blog ပေါ်က daily entry ထက် သူ့ရဲ့ အပြောင်းအလဲကိုလက်ခံနိုင်တဲ့စိတ်ကိုလေးစားအားကျမိတာပါ ။
ရပ်နေသောအရာဝတ္တု၏ ရပ်မြဲရပ်နေလိုသော သဘော ၊ ရွေ့လျားနေသောအရာဝတ္တု၏ ရွေ့လျားမြဲ ရွေ့လျားနေလိုသော သဘောကို အီနားရှား (inertia) လို့ခေါ်တယ်လို့ ကျမတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက သင်ယူမှတ်သားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပြေးစက်ပေါ်မှာပြေးနေတုန်း ရုတ်တရက်ရပ်လိုက်တဲ့ အချိန် ၊ အချိန်အတော်ကြာအောင် ကား ၊ လှေ ပေါ်မှာရှိနေပြီးမှ ရုတ်တရက်ရပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ခံစားရတဲ့အရာတွေက အီးနားရှားပေါ့…။ ပြေးခြင်း ၊ ကားစီးခြင်း စတဲ့ အခြေအနေသေးသေးမွှားမွှားလေးတွေမှာတောင် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အခြေအနေ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ နေသားတကျဖြစ်ဖို့အချိန်အတန်ကြာအောင်ယူရပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဘ၀ တစ်နေရာကနေ တခြားတစ်နေရာကိုရုတ်တရက်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်ကော ။ ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေနဲ့အတူ လိုတစ်မျိုးမလိုတစ်မျိူးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်တွေပါ ရောလာတဲ့အခါ တော်ရုံခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိူးနဲ့တောင် အပြောင်းအလဲကိုလက်ခံနိုင်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး ။
Cai Mingjie ရဲ့ ဘ၀အကြောင်းကိုကြည့်ရရင် သူဟာ တရုတ်ပြည်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ တရုတ်လူမျိူးတစ်ယောက် ၊ နောက်ပိုင်းမှ Singaporean အနေနဲ့ citizenship ပြောင်းပြီး singapore မှာနေထိုင်တဲ့သူပါ ။ ဒေါက်တာဘွဲ့ကို Stanford University ကနေ molecular biology နဲ့ရထားတဲ့လူတစ်ယောက် ၊ လုပ်သက် ၁၆ နှစ်ကျော်ရှိတဲ့သုတေသနပညာရှင် (ပါမောက္ခ ၊ သိပ္ပံပညာရှင်)တစ်ယောက်ပါ ။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကပ်ကြောင့် မေ ၂၀၀၈ မှာ စာချုပ်ကိုအဆုံးသတ်ကာ အလုပ်ဖြုတ်ခံရပါတယ် ။ အစိုးရအလုပ်တွေမှာရော တခြားကုပဏ်တွေမှာ အလုပ်တွေလျှောက်ခဲ့ပေမယ့် အဆင်မပြေတာကြောင့်ရယ် ၊ စီးပွားရေးကပ်ကြောင့်ရယ် အလုပ်တွေမရခဲ့ပါဘူး ။ နောက်ပြီး မိသားစုကိုပစ်ထားလို့မရတဲ့အတွက် တခြားနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့သူမို့ နောက်ဆုံး ၂၀၀၈ နိုဝင်ဘာမှ taxi စမောင်းခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့နေ့စဉ်အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို A Singapore Taxi Driver’s Diary ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ blog ရေးခဲ့ပါတယ်။ Follower တွေ fan တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကိုရခဲ့ပြီး 2010 မှာ A Singapore Taxi Driver’s Diary စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီစာအုပ်ကိုပဲ ဆရာမခင်စောတင့်က ‘တက္ကဆီဒရိုင်ဘာတစ်ဦး၏ နေ့စဉ်မှတ်တမ်း’ ဆိုပြီးမြန်မာဘာသာပြန်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိူးမှာ ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုရဖို့ဆိုတာ တော်တော်ခဲယဉ်းပြီး ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါ ။ ဒေါက်တာဘွဲ့ရဖို့ မာစတာ
ဆက်တက်ရပါတယ် ။ မာစတာကို ထူးထူးချွန်ချွန်အောင်မြင်ပြီး ကျောင်းက ရွေးချယ်မှ ဒေါက်တာဆက်တက်ခွင့်ရှိပါတယ် ။ များပြားလှတဲ့
ဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာသင်ယူ research လုပ် ၊ report တွေရေး ၊ publication တွေလုပ်ပြီးမှ ဒေါက်တာဘွဲ့ကို ခက်ခက်ခဲခဲရကြပါတယ်။ Cai Mingjie မှာ သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာ ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုရပြီး လုပ်သက် ၁၆ နှစ်ကျော်ရှိပြီးသူ့ရဲ့
သုတေသနလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ပြီးတဲ့အခါကျမှ အခုလိုမျိူး စီးပွားရေးကပ်ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာရင်းနှီးထားတဲ့ အချိန်တွေ ၊ ငွေတွေ ၊ ပညာတွေကို စွန့်ခွာပြီး သာမန်စာမတတ်တဲ့သူတွေတောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကို သူဘာလို့ရွေးချယ်လိုက်သလဲဆိုတာ
စာအုပ်ထဲမှာအတိအကျမပြောထားပါဘူး ။ ဒီလောက်ပညာတွေတတ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ ဘာလို့ taxi driver အလုပ်ကိုလုပ်ရလဲလို့မေးစရာရှိပါတယ် ။
လူနေမှုစရိတ်မြင့်မားတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ကြီးငယ်မဟူ အလုပ်မလုပ်ရင် ဘ၀ရပ်တည်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး ။ အလုပ်မရှိရင်
အကြွေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့အိမ်ခန်းခတွေ ၊ ကားခတွေ မပေးနိုင်ဘူး ၊ သားသမီးပညာရေးအတွက်လည်းမပံ့ပိုးနိုင်ဘူး ၊ စားဝတ်နေရေးအတွက် အဆင်မပြေဘူး ဆိုတော့ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာ သူ taxi driver အလုပ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။အလုပ်မရှိတဲ့လူကိုအသာထား အလုပ်ရှိတဲ့လူတောင်မှ လက်ရှိနေရာလေးကို မနည်းရအောင်တွယ်ကပ်နေရတဲ့အချိန်မှာ ပညာတွေအများကြီးတတ်ထားတဲ့ ၊ လစာတွေအများကြီးရနေတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် over education ဆိုပြီး အလုပ်ခန့်စရာနေရာမရှိပါဘူး။ဒီတော့ အလုပ်တွေကြိုးစားရှာပြီးမရတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ lab အခန်းကြီးကိုလည်း ခဏမေ့ထား ၊ phd တက်နေတဲ့ သူ့တပည့်တပန်းတွေကိုလည်းခဏမေ့ထားပြီး ပညာမာန၊ လစာထောင်ချီသောင်းချီရခဲ့တဲ့ ရွှေရောင်အတိတ်ကိုခဏထားပြီး တစ်နေ့လုံးအလုပ်လုပ်မှ ဒေါ်လာ ၃၀ နဲ့ ၅၀ ကြားမှာရတဲ့ taxi driver ဘ၀ကိုသူလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ သူလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
လူတွေဟာ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှိလာတာနဲ့အမျှ မာနဆိုတာက ဥစ္စာတိုးသလို တရိပ်ရိပ်လိုက်တိုးလာခဲ့ပါတယ် ။ ဥစ္စာမရှိပြန်တော့လည်း
ဆင်းရဲသားမာနဆိုတာတမျိူး ၊ ပညာတတ်တော့ ပညာမာနဆိုတာက တဖုံနဲ့ မာနတွေအမျိူးစုံရှိတတ်ကြပါတယ် ။ ကျမဆိုရင်လည်း ရထားတဲ့ ဘွဲ့ပေါက်စနလေးပေမယ့် ငါက ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ရ ၊ ငါ အောက်ခြေသိမ်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ မာနကလေးရှိတတ်ပါတယ် ။ အလုပ်ထဲမှာ မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတဲ့အခါ ငါ့ကိုဒါမျိူးတွေကိုခိုင်းရမလားဆိုတဲ့ အလိုမကျစိတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ကျမတတ်တဲ့ ပညာဟာ Cai Mingjie တတ်တဲ့ပညာနဲ့ယှဉ်ရင် ဆင်နဲ့ဆိတ်လောက်ကွာပေမယ့် ခုနေ ပိုက်ဆံအရမ်းလိုလို့ taxi မောင်းမလားဆို ကျမခါးခါးသီးသီးငြင်းဆန်မိမှာပါ ။ ပညာတတ်မို့ ပညာတတ်ဆန်တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ တစ်ယူသန် စိတ်ဓာတ်မျိူးကို မစို့မပို့ပညာမာနလေးရယ်နဲ့အတူ ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ သူ့လိုရောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာ သဟဇာတဖြစ်အောင်နေဖို့ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိူးကို ကျမမမွေးဖွားနိုင်သေးပါဘူး ။
အကျီလက်ရှည်ဝတ်ထားတဲ့ taxi driver ဒေါက်တာ Cai Mingjie မှာ taxi ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့ အဖြူ ၊ အမဲ ၊ အညို အသားအရောင်ပေါင်းစုံ နဲ့ကြုံရသလို အင်္ဂလိပ် ၊ တရုတ် ၊ မြန်မာ ၊ ဖိလစ်ပိုင် ၊ ထိုင်း စတဲ့လူမျိူးပေါင်းစုံ နဲ့တွေ့ရပါတယ်။ ပညာတတ် ၊ ကျောင်းသူ ၊ အိမ်ဖော် ၊ ပြည်တန်ဆာ စတဲ့ အလုပ်အကိုင်ပေါင်းစုံ နဲ့ လူတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒေါသကြီးသူ ၊ သဘောထားကြီးသူ ၊ စိတ်ညစ်နေသူ ၊ မာကျောက်နိုင်လာတဲ့သူ ၊ အရက်မူးနေတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရသလို ၊ သူ့လောက်စာမတတ်တဲ့သူ ၊ သူထက်စာတတ်တဲ့သူတွေကိုလည်းတွေ့ရပေမယ့် သူက ဘယ်သူ့ကိုမဆို customer ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ် ။ မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ရှာဖွေရေးအတွက်သူ မညည်းညူခဲ့သလို ၊ အထွတ်အထိပ်ရောက်ခဲ့တဲ့ သူ့ပညာရေးအတွက်လည်း မာနတခွဲသားနဲ့ customer တွေကိုမဆက်ဆံခဲ့ပါဘူး ။ စကားပြောချင်မယ့်ပုံကိုတွေ့ရင်
အလိုက်အထိုက်ပြောပြီး ၊ စကားမပြောချင်တဲ့သူကို နှုတ်ပိတ်နေကာ ၊ ရန်စတဲ့သူကိုလည်း ငါပါမောက္ခဟောင်းကွ ဆိုပြီး
ဒေါသတကြီးနဲ့မတုန့်ပြန်ခဲ့ပါဘူး ။ သူ့ကို လိမ်ဖို့ကြိုးစားရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြောပြသလို ၊ သူ့အပေါ် tip
ပေးတဲ့သူကြီးငယ်မဟူကိုလည်း သူကျေးဇူးတင်တတ်ခဲ့ပါတယ် ။ သူလမ်းမှားတာကို နားလည်ပေးတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်အမျိူးသားကိုကျေးဇူးတင်သလို သူ့အပေါ်လူလည်ကျတဲ့ နိုင်ငံကြီးသားတွေကိုလည်း သူရပိုင်ခွင့်ရှိတာကို ပြန်တောင်းပါတယ် ။ သူ့လို ရုန်းကန်နေတဲ့ တစ်လ ဒေါ်လာငါးရာသာရတဲ့ မြန်မာလူမျိူးတစ်ယောက်ကိုလည်း taxi ခလျော့ပေးသလို ၊ အင်္ဂလိပ်လူမျိူးတစ်ယောက် ပစ္စည်းကျန်ခဲ့လို့ ပြန်လာပေးတဲ့အချိန် ၊ အချိန်ကုန် ဆီကုန်ခံပြီး ပစ္စည်းလာပြန်ပေးခကိုလည်း ပြန်တောင်းတတ်ပါတယ် ။
ဒေါက်တာ Cai Mingjie ရဲ့ ဘ၀ဟာ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်သာဆိုရင် သူ့ရဲ့ taxi မောင်းရတဲ့ ဘ၀လှည့်ကွက်လေးဟာ climax လို့ပြောလို့ရသလို ၊ သူ့ရဲ့လူသားဆန်မှု ၊ နားလည်မှု ၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကို လှစ်ဟမြင်နိုင်တဲ့ အခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ တကယ်တော့ “တက္ကဆီဒရိုင်ဘာတစ်ဦး၏ နေ့စဉ်မှတ်တမ်း” ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဟာ အချိန်နာရီပိုင်းမျှသာပေးရတဲ့စာအုပ်ပါးလေးတစ်အုပ်ပါ ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစာအုပ်ပါးလေးမှာပဲ သူဖော်မပြထားတဲ့ ပညာတတ်တစ်ယောက်ရဲ့ အပြောင်းအလဲကိုလက်ခံနိုင်စွမ်း ၊ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လူသားဆန်မှု ၊ taxi driver တစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀မှတ်တမ်း ၊ စင်ကာပူရဲ့လူနေမှု တွေအပြင် ခေတ်ကာလကိုပါထင်ဟပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဘ၀မှာအကျိူးအကြောင်းမညီညွတ်လို့ ရွေးချယ်ရာလမ်းကြောင်းကသွေဖယ်ခဲ့ရင်လည်းစိတ်ဓာတ်မကျဘဲ လမ်းမှန်တစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ကာ ရောက်ရာအရပ်မှာ လူသားဆန်ဆန်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေဖို့ အဲဒီစာအုပ်လေးက သင်ပြပေးပါတယ်။ တကယ်လို့အချိန်တစ်နာရီကျော်လောက်ရမယ်ဆိုရင် ဆရာမခင်စောတင့်ဘာသာပြန်တဲ့ “တက္ကဆီဒရိုင်ဘာတစ်ဦး၏ နေ့စဉ်မှတ်တမ်း” ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင့် ။
Trans Siberian ခရီးစဉ်- ၁၁
Trans Siberian ခရီးစဉ်-၉
Trans Siberian ခရီးစဉ်- ၁၀
Trans Siberian ခရီးစဉ်-၈
Russia ကိုသွားမလည်ခင်သိသင့်တဲ့ အချက်(၂၀)
Filed Under: အတွေးတစ်စ
Art, Craft နှင့်ရောက်တတ်ရာရာ
2 thoughts on “Diary of A Taxi Driver (တက္ကဆီဒရိုင်ဘာတစ်ဦး၏ နေ့စဉ်မှတ်တမ်း- ခင်စောတင့်)”
February 2, 2015 at 5:58 am
မှန်တယ်။ဆုမြတ်ရေ..အသူဆိုလဲကိုယ့်မရှိစလောက်ဘွဲ့လေးနဲ့ မာန်တွေတက်မိခဲ့တာပဲ။မိသားစုဝမ်းရေးနဲ့ယှဉ်လိုက်တော့ ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်တွေအားလုံး ခဝါချ.ဘာရရလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ မနိမ့်လွန်းမမြင့်လွန်းတဲ့ခုအလုပ်လေးကိုရခဲ့တာကလဲ..ဒေါက်တာ Cai Mingjie လောက်အခြေအနေမဆိုးခဲ့ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။
ဒါပေမယ့် လူသဘာဝ၊လောဘအရ..ခုထက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုတော့ မျှော်လင့်မိနေတုန်းပဲ ဆုမြတ်ရေ..
Myat Kyi says:
February 3, 2015 at 8:32 am
WOw, nice post. 🙂 After reading this, i looked back myself and found that there are too much extra pride in me that has to be cut down.
LeaveaReply to Ahthu Cancel reply
by ဆုမြတ်မိုး blog အား ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်
Tonight, I cry
Women's World Journal
Archives Select Month November 2020 (1) November 2019 (1) October 2019 (1) February 2019 (1) January 2019 (3) December 2018 (5) August 2018 (1) January 2018 (1) December 2017 (1) November 2017 (4) October 2017 (2) September 2017 (3) August 2017 (5) July 2017 (1) June 2017 (1) May 2017 (4) April 2017 (3) March 2017 (1) December 2016 (2) November 2016 (2) June 2016 (3) February 2015 (2) December 2014 (1) November 2014 (1) October 2014 (2) September 2014 (3) October 2013 (1) September 2013 (2) August 2013 (2) July 2013 (6) June 2013 (6) May 2013 (25) April 2013 (2)
Categories Select Category ၀တ္တုတို (13) 20 Facts (3) bulletin board (4) tag (3) Women’s World Journal (5) ကဗျာ (29) ခရီးသွားမှတ်တမ်း (16) ချစ်သူအတွက် (3) စာအုပ် (1) စိတ်ထဲရှိသမျှ (18) ထိုသောကြာ (2) ဘာသာပြန် (1) မစိမ်းပြာ (1) ဟိုလိုလို ဒီလိုလို (10) အမှတ်တရများ (16) အတွေးတစ်စ (17) မောင်လေး (2) ရွှေဒေါင်းတောင် (2) ကြုံရဆုံရ (6)
Anonymous on Trans Siberian ခရီးစဉ်-၈
ဆုမြတ် on Trans Siberian ခရီးစဉ်-၂
Blogger since 2009
Adora & ect
June & May
Mon Mon's Diary
စိတ်ဝင်စားစရာ မာမာရဲ့ ၀ါသနာများ
မဖြိုးဖြိုး ၊ မစုမီအောင်
Copyright © 2020-2022 by HSUMYATMOE.COM